Madaxweyne Farmaajo oo xalay Xaflad sagootin ah lagu sameyaay dhuusamareeb (Sawiro) – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo xalay Xaflad sagootin ah lagu sameyaay dhuusamareeb (Sawiro)
Janaayo 19, 2018 12:41 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya oo weli Safaro Ku maraya qaar Ka mid ah Gobolka Galgaduud ayaa waxaa xalay Magaalada Dhuusamareeb loogu sameeyay Xaflad soo dhaeyn ah.
Xaflada oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Galmudug ayaa waxaa ka qeybagalay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo qeybaha Bulshada iyo amrtida ku sugan dhuusamareeb.
Dhammaan madaxdii iyo Bulshada ka qeyb gashay Xaflada ayaa dowladda uga mahadceliyay sida dowladda Soomaaliya waqtiga u gelisay in nabad loo kala dhexdhigay Madaxda Maamulka Galmudug iyo Ahlusunna oo ku biirtay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saacadaha nasoo aadan waxa uu tegi doonaa Magaalada Guriceel iyada oo qaban qaabada soo dhaweyntiisa ay ka socoto halkaas.
Madaxweynaha Farmaajo oo Guriceel ku wahan (dhegayso)